Mpanoratra? Fomba 7 matanjaka hahatonga ny bokinao ho mpivarotra varotra iraisam-pirenena | Martech Zone
Tsy isalasalana, raha mpanoratra maniry fatratra ianao amin'ny fotoana sasany amin'ny asanao dia tsy maintsy nametraka ilay fanontaniana ianao hoe: Ahoana no hanaovana ny bokiko ho mpividy indrindra? ho an'ny mpanonta na mpanoratra tsara indrindra. Right? Amin'ny maha-mpanoratra anao, raha te-hivarotra ny bokinao amin'ny mpamaky isa indrindra ianao ary hankasitraka azy ireo dia misy dikany tanteraka izany! Miharihary fa ny fiovana toy izany eo amin'ny asanao dia hamela anao hanangana laza tsy nisy toy izany teo aloha.
Ka raha tianao ho re ny feonao dia mila manao dingana mahomby sy manokana ianao. Azo antoka fa tsy afaka mamadika novel ho bestseller ianao raha tsy voasoratra tsara. Saingy, ankoatry ny fandinihana fotsiny ny zava-misy momba ny fanoratana amin'ny fomba tena tsara dia tokony hikarakara zava-misy hafa ianao mba hahatonga ny bokinao ho boky tsara indrindra.
Te hahafantatra ny tsiambaratelon'ny fanaovana izany? Avy eo, ireto ny fomba enina izay ahafahanao manao ny bokinao ho resaka lehibe indrindra eto an-tanàna. Vakio fotsiny mialoha dia mino aho fa tena mety aminao ireto torohevitra ireto!
Mandehana mitady zavatra inoanao - Raha manana hevitra ao an-tsainao ianao fa ny lohahevitra iray izay mety hahasarika ny besinimaro dia hahatonga ny bokinao ho mpividy indrindra dia diso tanteraka ianao. Soraty kosa ireo lohahevitra toy izany izay hitanao fa mahaliana anao ary tianao ny hamaky momba an'io. Araka ny nolazain'i Carol Shields hoe: 'Soraty ny boky tianao hovakiana, ilay iray tsy hitanao'. Noho izany, na eo aza ny fanoratanao boky monotonous amin'ny fomba mahazatra raha manoratra tantara iray manandanja anao ianao dia misy vintana lehibe kokoa ho tonga mpivarotra lafo indrindra.
Misafidiana lohahevitra mety - Ny iray amin'ireo antony tsara indrindra ahafahan'ny noveloma miavaka amin'ny ambiny dia ny lohahevitra ao. Ireo mpamakinao dia manoro ny bokinao amin'ny hafa raha tsy rehefa afaka mifandray amin'izy ireo izy ireo. Izy ireo koa dia manondro boky any amina olona rehefa hitany fa mampita hafatra ilain'ny hafa vakina ilay boky. Noho izany, tokony hampiasa ny fotoananao sy herinao sarobidy ianao hahalalanao ny lohahevitra mety amin'ny novelonao.
Avelao tsy miandany ny feo - Raha ny teny filamatrao dia ny hahatonga ny bokinao ho fantatra manerana an'izao tontolo izao dia tokony hanoratra amin'ny fomba afaka mifandray amin'ny mpamaky rehetra ianao. Fa, andraso! Amin'ity fanambarana nataoko ity dia tsy midika akory izany fa ny tantaranao dia tokony hiorina amin'ny kolontsaina manerantany fotsiny. Azonao atao ny manoratra tantara iray momba ny zavatra izay manakaiky ny fonao, toy ny firenenao, ny kolotsainao na inona na inona! Hamarino fotsiny fa ny fifanakalozan-kevitra, ny fitantarana, ny fomba fanoratra sns dia azon'ny mpanatrika izay manatrika an'izao tontolo izao. Tadidinao ve ilay mpandresy tamin'ny loka Booker tamin'ny 2015- Tantara fohy momba ny famonoana olona fito? Eny, miresaka karazana feo toy izany aho.
Mamolavola tokana ny 'Covero Boky' - Mety nino ny fanambarana toy ny 'Aza mitsara boky amin'ny fonony' isika nandritra ny taona maro. Saingy, raha ny tena izy, ny fijerin'ny endrika ivelany ny boky dia matetika mampita ny tantara manontolo amin'ny fomba tsotsotra izay voasoratra ao anatiny. Noho izany, ny fanomezana ny bokinao ny iray amin'ireo endrika tsara fanahy dia mikasa ny ho zava-dehibe. Saingy, aza mieritreritra fa mila mamoaka vola be ianao amin'ny fanaovana an'io! Ny hany ilainao dia ny mpamorona mpamorona izay manam-pahaizana amin'ny famelomana ireo hevitra velona amin'ny resaka rakotra boky kilasy.
Misafidiana mpanonta tonga lafatra - Eny, rehefa tonga ny famadihana ny boky ho lasa bestseller dia manao ny anjara asan'ny 'Ny manan-danja indrindra' ny mpanonta. Ny fahatokisan'ny marika an'ny mpampanonta izay nofidinao dia hisy fiantraikany amin'ny fahatokisan'ny bokinao amin'ny fomba midadasika. Noho izany, aza adino ny misafidy mpanonta toa izany izay afaka mamela ny kisarisin'ny fivarotan'ny bokinao ho avo kokoa !!
Mamorona pejy mpanoratra sy mombamomba ny boky ao amin'ny 'Goodreads' - Raha resaka mpitia boky dia Goodreads no anarana be laza !! Noho izany, raha te-hamela ny bokinao hamidy tsara ianao dia tokony hataonao hitan'ny mpanatrika izay manatrika an'izao tontolo izao. Ary, Goodreads no safidy tsara indrindra hanaovana an'io! Vantany vao vita ny fanaovana kaonty ao amin'ny 'Goodreads', angataho ny namanao, mpanaraka anao ary mpamaky anao hametraka hevitra eo amin'ilay tranonkala ary farany fa tsy ny kely indrindra hanoro izany amin'ireo mpampiasa hafa an'ity tranonkala ity.
Mampiasà media sosialy hanaovana doka - Amin'izao fotoana izao, mandany ny ankamaroan'ny fotoanany malalaka ny olona mandritra ny Internet amin'ny tambajotra sosialy isan-karazany toy ny Facebook, Twitter, Instagram sns. Ka noho izany, raha te hamela fahatsapana mafy ny bokinao amin'izao tontolo izao ianao dia ampiasao ireo sehatra ireo mba hivarotana ny bokinao izay hanatsara ny fahatsiarovanao sy ny fanaovana dokambarotra anao. Te hahafantatra ny fomba? Eny, tsotra sy mora izy io! Ny famoronana tranofiara boky, fizarana mitanisa boky, fanaovana sary doodles dia azo antoka fa hahagaga anao.
Ankoatra ireo zava-misy lehibe voalaza etsy ambony ireo dia tokony hitahiry ao an-tsainao zavatra hafa isan-karazany ianao raha tianao ny hahatonga ny bokinao ho mpivarotra indrindra. Toy ny fanovana sy fanovana indray ny bokinao imbetsaka, famoahana dikanteny mihitsy aza, fananana tranokalan'ny mpanoratra, fandefasana mailaka amin'ireo mpamandrika anao, fanoratanao blurb boky maharesy lahatra sns. Dia azo antoka fa hanampy anao hamorona na inona na inona afa-tsy ny bestseller. Aza miandry intsony! Diniho fotsiny ireto torohevitra ireto, mandrosoa, manorata ary hamoaka tsy ho ela ny mpivarotra anao iraisam-pirenena.
Tags: Best SellerBest Sellerbokyboky kantofonon-bokyfampiroboroboana ny bokyGoodreadsPublishingfampiroboroboana ara-tsosialymanoratra boky